माघ २४ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचन, हेर्नुहोस् कुन प्रदेशमा कसका कति मतदाता ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
माघ २४ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचन, हेर्नुहोस् कुन प्रदेशमा कसका कति मतदाता ?
प्रकाशित मिति २२ माघ २०७४, सोमबार १६:०० लेखक नेपालीजनता
काठमाडौं । माघ २४ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । यो निर्वाचनमार्फत प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । जसका लागि निर्वाचन कर्यतालिका अनुसार झण्डै दुई दर्जन राजनीतिक दलहरूले गत माघ १० गते उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन् ।
यही मतभारका आधारमा हरेक प्रदेशबाट ८ जना सदस्य राष्ट्रियसभाका लागि चुनिनेछन् । राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । राष्ट्रियसभाका ३ जना सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनले यो निर्वाचनमा पनि ५६ सिटमध्ये ४२ सिट जित्ने दाबी गरेको छ । बाँकी सिटमा काँग्रेस र मधेसवादीदलले जित्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रेमी नै पुर्याउँछन् कोठीमा
काठमाडौं । वनका सुख दुःख सँगै काट्न वाचा गरी पिरती लाएको प्रेमीले प्रेमिकालाई नरकको जिन्दगीतर्फ धकेल्छ भन्ने कसले पो सोच्छ…
परिवार नियोजन: जानकारी छ प्रयोग छैन
काठमाडौं । परिवार नियोजनका बारेमा आमव्यक्तिलाई जानकारी छ, तर प्रयोगदर भने न्यून नै रहेको पाइएको छ । परिवार नियोजनका…
बालबालिकालाई आफ्ना आमा-बुबाले जस्तो मायाप्रेम अरु कसैले गर्न सक्दैन । तर यही माया-पे्रम गर्ने क्रममा कुनै पनि कुराको लागि…
अमेरिका जाँदै राष्ट्रपति भण्डारी,‘शक्तिमा नारी’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज अमेरिका प्रस्थान गर्दैछिन् । महिलाको स्थितिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आयोग (सीएसडब्ल्यू) को ६३औँ…
दाङ । सडक दुर्घटनामा गम्भीर घाइते दाङका प्रदेश सांसद् उत्तरकुमार ओलीको बिहीबार राति निधन भएको छ । ललितपुरस्थित मेडिसिटी…